Wacaal iyo Maanta: Shan qodob oo muhim ah inaad ogaatid maantay oo salaaso ah |
Tuesday, October 29th, 2013 Wacaal iyo Maanta: Shan qodob oo muhim ah inaad ogaatid maantay oo salaaso ah
ShareLondon, Wacaal Media
Turkiga oo laba munaasabadood oo waawayn maantay u dabaal dagay Dalka Turkiga ayaa maantay u dabaal dagay 90 sana guuradii ka soo wareegtay Jamhuuriyadda cusub ee Turkiga iyo mashruuc wayn oo tareen badda hoosteeda maraya oo isku xiraya labada qaaradood ee Yurub iyo Aasiya.
Xafladda loogu dabaal dagayay labada munaasabadood waxaa furay Ra’iisul Wasaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxaana ka soo qayb galay madax caalami ah sida Ra’iisul wasaraha dalka Japan oo dowladiisa ay ka qayb qaadatay mashuuraacan wayn ee Tareenka isku xira qaaradaha Yurub iyo Aasiya kaas oo la shegay inuu ku kacay aduun gaaraya 3 bilyan oo euro,
Waxaa la shegay in mashruucan fikirkiisa uu iska lahaa Sultaan Abdulmejid kaas oo xukumayay dalka Turkiga muddo hadda laga joogo qarni iyo bar.
Jabuuti oo sheegtay in Al-Shabaab dalkeeda weerar ku soo yihiin Dowladda Jabuuti ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii ciidamadeeda ay galeen gudaha Soomaliya daboolka ka qaaday in weeraro ay kaga soo fool leeyihiin dagaalyahannada Al-Shabaab .
Wasiirka Arimaha gudaha ee Jamhuuriyadda dariska la ah Soomaliya ee Jabuuti Xassan Cumar ayaa daboolka ka qaaday in ururka Al-Shabab ay doonayaan inay dhaawac u gaystaan dalkiisa, balse waxuu sheegay inay diyaar u yihiin inay ka hortagaan, isagoona dhanka kale shacabka dalkiisa ugu baaqay inaysan soo dhawaysan kuwa cadowga ku ah dalkooda.
Midowga Yurub oo Maraykanka kala hadlaya basaasidda madaxda Yurub.
Xubno ka tirsan baalamaanka wadamada midowga Yurub ayaa kulan kula leh magaalada Washingtown xubnaha congresska Maraykanka iyo saraakiil kale oo ka tirsan dawladda Maraykanka, kuwaas oo kawada hadlaya xogta shegaysa in hay’adda sirdoonka ee dalkaasi ay in muddo ahba dhagaysanaysan Tilifoonada madaxda Yurub.
Dhanka kale Madaxaa guddiga awoodda badan ee sirdoonka ee aqalka Senet-ka Maraykanka ayaa ku baaqday in dib u eegid ballaaran lagu sameeyo qaabka uu Maraykanku wax u basaaso.
Haweenaydaan ayaa sheegtay inay ceeb kutahay tahay in Maraykanka inuu basaaso hoggaamiyayaasha waddamada ay xulafada yihiin sida Haweenayda madaxda ka ah dalka Jarmalka.
Dowladda Norway oo ka dalbatay Saadiq inuu dalka dib ugu soo laabto
Xukuumada Norway waxay iga dalbatay inaan dalka dib ugu soo noqdo laakiin anigu waxaan ahay aabbe ay kamaqanyihiin labadiisa gabdhood, ma kusoo laaban karo dalka inta aan ka helayo gabdhahayga, kuma ogi geeri iyo nolol midna sidaas waxaa Joornaalka Dagbaladet u sheegay Saadiq oo gabdhihiisa ka baadi goobaya magaalada Hatay ee dhacda xuduudka Turkiga iyo Suuriya.
Sidookale Saadiq waxa uu sheegay in uu la shaqaynayo garyaqaan Geir Lippestad oo ah qareen caan ka ah dalkaas Norway, Geir ayaa qareen u ahaa dilaagii Bareivik kaas oo laba sanadood ka hor 77 ruux oo caruur u badan ku laayay jasiirad ku taala dalkaas.
Xanuunka dabaysha oo ka dilaacay dalka Suuriya
Hay’adda caafimaad dunida ee WHO ayaa sheegtay inay baaritaan ku wadaan caruur gaaraysa 12 kuwaas oo ay ka muuqdaan astaamihii cudurka dabaysa kaas oo aan lagu arkin dalkaas waxii ka dambeeyay sanadkii 1999-kii .
WHO ayaa ka digtay horaantii bishaan in dalkaas Suuriya ee colaadu ay ka dagtay uu halis ugu jiro xanuuno badan, maadaama colaaddu ay sii daba dheeraatay, adeegii caafimaad ee dowliga ahaana oo aysan shacabka badankiisu heli karin.
2 Responses for “Wacaal iyo Maanta: Shan qodob oo muhim ah inaad ogaatid maantay oo salaaso ah”
Abdalle says:	October 29, 2013 at 10:16 pm	Good News.Idaacahada caalamiga ah baa sidaan oo kale wax u qora Wacaaleey go forward and never go back.
ducaysane says:	October 29, 2013 at 11:17 pm	Thanks wacaalay si wanagsan ayaa noogu sheegteen ma anan ogayn jabuuti oo cabsanaysa ma anan ogayn caawa aya seexanaya maadaama ina cumar geelle godkiisii ay biyo ugu galeeb, khaur alaha idin siiyo wax wanagsan aya sheegteen.
Xuska qowmiyadaha dalka Ethiopia oo maalinimadda berri ka billaabanaya Magaalada Jigjiga
08 December,2013 at 00:26:17 / No comment Dadkii ku dhaawacmay qaraxii ismiidaaminta ee Boosaaso oo xaaladoodu soo kabanaysa (Sawiro)
07 December,2013 at 08:21:51 / No comment Latest News in English